Asphalt 9: Halyeeyo, oo hadda laga heli karo App Store | Wararka IPhone
Asphalt 9: Halyeeyada, hadda waxaa laga heli karaa App Store
Ignacio Sala | | Ciyaaraha IPhone
Sagaarka Asphalt wuxuu noqday mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee aan maanta ka heli karno aaladaha moobaylka. In kasta oo ay run tahay oo aan kaligeed ka mid ahayn qaabkan aan ka heli karno App Store, haddana waa midka bixiya sawirada ugu fiican iyo ciyaarista. Laakiin wax walbaa maahan wax qurux badan, tan iyo sannadihii la soo dhaafay, Gameloft wuxuu noocyada noocan ah u rogay mashiinno Afyare.
Gameloft, sida kuwa kale ee horumariya, wakhti hore ayaa ka tanaasulay fikradda ah in dadka isticmaala loo ogolaado inay ciyaarta iibsadaan oo ay iska ilaawaan si ay u ciyaari karaan inta ay iyagu doonayaan. Iibsashada app-ka ah, waa inaad dulqaad badan leedahay oo aad ku celcelisaa tartamo badan haddii aad rabto inaad si dhaqso leh ciyaarta ugu gudubto, haddii aynaan diyaar u ahayn inaan si joogto ah u bixino.
Haddii aynaan tixgelinin habka lacag-u-dejinta, Asphalt 9 shirkaddu waxay na siisay sagaaro cusub oo aan ka heli karno gawaarida isboortiga cajiibka ah, gawaarida aan habeyn karno. Cayaartu waxay na siineysaa 60 xilli iyo in ka badan 800 oo munaasabado kala duwan oo aan ku qasbanaaneyno inaan kaqeybqaadano si aan u noqonno boqorka wadada 70 wareeg ayaa ku faafay adduunka, dhacdooyinka aan sidoo kale dooneyno inaan ka fogaanno duufaanno waaweyn oo ka dhaca dalal Mareykan ah si ay ugu soo go'do Himalayas iyadoo la adeegsanayo jiingadaha.
Asphalt 9 waxay na siineysaa nidaam xakameyn cusub oo taas ah waxay hagaajineysaa jihada, oo loo yaqaan 'Touch Drive', si ay ciyaartoydu diiradda u saaraan tartanka, in kasta oo aan sidoo kale gacanta ku hayno gacan ku haynta, kontaroolada noo oggolaanaya inaan baranno wadista sida haddii aan xirfadle nahay. Iyada oo leh Drive Drive, isteerinka iyo xakamaynta ayaa otomaatig ah, oo waa inaan kaliya riixnaa shaashadda si aan u siibanno una adeegsanno nitros-ka.
Haddii aad jeceshahay Asphalt 8: Hawada oo aad u isticmaashay ciyaarta sida ay noogu soo bandhigtay tartanno dhaadheer halka ay ahayd inaad ku bixiso dhammaantiin, Asphalt 9: Legends midkoodna ma heli doontid. Waxay umuuqataa in noocani cusubi uu muhiimada siinayo sawirada, kuwaas oo ah kuwo cajiib ah, marka loo eego ciyaarta ay noogu soo bandhigtay noocyadii hore. Laakiin sawiradu maahan wax walba.
Qaabka cusub ee wadista baabuurta, Touch Drive, ayaa loogu talagalay soo jiito isticmaaleyaasha cusub kuwaas oo aan waligood isku dayin ciyaar nuucaan oo kale ah oo aan dooneynin inay noloshooda ku adkaadaan curve waxbarasho dheer. Halyeeyada, sida kiiskeyga tahay, waa inaan u degno qaabkii hore, illaa iyo hadda wixii cusbooneysiin ah ay wax isbeddelaan mooyee.
Asphalt 9: Halyeeyada waxay u baahan yihiin ugu yaraan iPad Mini 2 ama iPhone 5s, oo lagu daray xiriir internet ah. Waa loo heli karaa adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaash iyada oo loo marayo xiriirka aan ka tago dhamaadka maqaalkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Ciyaaraha IPhone » Asphalt 9: Halyeeyada, hadda waxaa laga heli karaa App Store